एकै पटकमा ४ वटा बच्चालाई जन्म दिएकि आमाकाे यस्तो दुःखद निधन – PathivaraOnline
Home > समाचार > एकै पटकमा ४ वटा बच्चालाई जन्म दिएकि आमाकाे यस्तो दुःखद निधन
धनुषा- धनुषाकी एक महिलाले एकै पटकमा ४ वटा बच्चालाई जन्म दिएकी छन् । धनुषाको विदेह नगरपालिका–७ जोगियारा बस्ने २२ वर्षीया अरमाना खातुनले जनकपुरको काव्या अस्पतालमा मंगलबार राति एकैपटक चार वटा बच्चालाई जन्म दिएकी हुन् । शिशु जन्मिएपछि खातुनको भने मृत्यु भएको छ । फोक्सोमा पानी जमेर पलमन्ड्री एडिमा देखिएकोले डा. अजय यादवको निगरानीमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने क्रममा उनको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
उनको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरी प्रादेशिक प्रयोगशाला जनकपुरमा पठाइएको डा. सिंहले जानकारी दिए । काव्या अस्पतालमा भर्ना भएकी अरमानाको प्रसूतिका लागि मंगलबार बिहान स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा. सोनिया सिंहले शल्यक्रिया मार्फत ती बच्चाहरु निकालेकी थिइन् ।
अरमानाले ३ छोरी र १ छोरा जन्माएकी छन् । शिशुहरु मध्ये छोराको तौल डेढ किलो र छोरीहरुको तौल सवा एक किलो रहेको काव्या अस्पतालले जनाएको छ । शिशुहरु मध्ये ३ वटाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेपनि एक शिशुको अवस्था भने अस्थिर देखिएको डाक्टर एसके सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार शिशुहरुको श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ हुनसक्ने भएकाले केही साता विशेष स्वास्थ्य निगरानीमा अस्पतालमा राखिने छ।
बहराइनका राजकुमार पर्वतारोहणका लागि नेपाल आउँदै
काठमाडौं- बहराइनका राजकुमार पर्वतारोहणका लागि नेपाल आउने भएका छन् । सरकारले पर्वतारोहणका लागि सेप्टेम्बर १५, २०२० पछि उनलाई चार्टर्ड विमानबाट नेपाल आउने अनुमति दिएको छ । बहराइनका राजकुमार सलमानसहित १५ जना र तीन जना बेलायती नागरिकलाई चार्टड विमानबाट नेपाल आउन अनुमति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, अर्थ/सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।
उनीहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालायले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन र नियम अनुसार लोघुचे र मनास्लु हिमाल आरोहण गर्न पाउनेछन् । यो हिमाल पर्वतारोहणको क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको महामारीपछि भएको पहिलो निर्णय भएको उनले बताए ।